NK | मा.बि. सेन्टरको आईसिटी ल्याबको उपमेयर आचार्यद्धारा उद्घाटन
दाङ / तुलसीपुर । माध्यामिक बिद्यालय तुलसीपुर सेन्टरमा आईटी सीटि ल्याव सञ्चालनमा आएको छ ।
२४ थान कम्युटर,४ वटा सिसी क्यामेरा,१६ वटा व्याक–अप व्याट्रि, इन्र्भटर, नेटर्वकिङको लागी सर्भर मेसिन, प्रोजेक्टर, साउण्ड सिस्टमका साम्रागीहरु रहेको उक्त आईटी सीटि ल्यावकको तुलसीपुर उपमहानगरपालीकाकी उपमेयर मायाले आचार्यले उद्घाटन गर्नुभएको हो।
बिद्यालयलाई प्रबिधिमैत्री बनाउन लागिएको बिद्यालयका प्रधानाध्यापक भागवत पौडे्लले बताउनुभयो ।
प्रबिधिमैत्री बिद्यालय बन्दा बिद्यार्थीहरुलाई प्रबिधिको प्रयोगबाट अध्ययन अध्यापन गर्न सहज बन्ने र बिद्यालयमा भर्चुल शिक्षण बिधि समेत प्रभाबकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल टेलिकम प्राधिकरणले करिब ३८ लाख बराबरको प्रबिधियुक्त साम्रागीहरु सहयोग गरेको छ ।
उपमहानगरपालीकाकी उपमेयर आचार्यले स्थानीय स्तरमै प्रबिधियुक्त बिद्यालयबाट गुणस्तरिय शिक्षण सिकाई हुने भएकाले कमजोर वर्गका बालबालिकाले पनि सर्वसुलभ तरीकाले अध्ययन गर्न पाउने अपेक्षा गर्नुभयो ।
माबि तुलसीपुर सेन्टरले उच्च शिक्षाका लागी नेपाल सरकारद्धारा संञ्चालीत इलेक्ट्रीकल,सिटीइभिटी अन्र्तगत आई.टी. ईन्जीनीयरिङ बिषयहरुको अध्यापन गराउदै आएको छ । भने यस वर्षबाट थप दुई वटा बिज्ञान र ब्यबस्थापन बिषयहरुका कक्षा समेत सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको बिद्यालयका प्रधानाध्यापक पौडे्लले जानकारी दिनुभयो ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छिमेकी जिल्ला रोल्पा,रुकुम,सल्यान,प्युठान लगायतका बिभिन्न जिल्लाहरु बाट बिद्यार्थीहरु आउने गरेका छन् ।
उक्त बिद्यालय गत वर्ष आईटिमा नेपालको सर्वोत्कृष्ट भएको दावी गरिएको छ । बिद्यार्थी संगम खड्काले आईटीमा गत बर्ष सर्बोत्कृष्ट हुनुभएको हो । त्यस्तै ईलेक्ट्रीकल तर्फ सोही बिद्यालयका छात्र दाङ जिल्ला प्रथम भएका बिद्यालयले जनाएको छ ।
हाल सम्म ईलेक्ट्रीकल तर्फ १९२ जना र सिटीभिटी अन्तर्गत निशुल्क स्वरोजगार मार्फत लेभल १ मा १८० र लेभल २ मा २० गरि कुल ३९२ बिधार्थीहरु उत्पादन भैसेका छन् ।
बिद्यालयमा कक्षा ८ सम्मका छात्रा,कक्षा १० सम्म दलित समुदायमका छात्रछात्राहरुले छात्रवृति पाउने गरेका छन् ।
यस्तै बिधालयको अक्षेय कोष मार्फत प्रथम,द्धितिय र तृतिय हुने छात्रछात्रले पनि पढाईका लागी खर्च हुने सम्पूर्ण खर्च बिद्यालयले ब्यर्होने ब्यबस्था मिलाएको छ ।
यस्तै आईटी तर्फका ३ जनालाई सीटिभिटीले,ईलेक्ट्रीकल तर्फ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा १९ जना र उक्त बिद्यालयले ३ जनालाई निशुल्क छात्रबृत्तिको ब्यबस्था गरिएको छ ।
जनजाती, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ सबैले एकमुष्ठ ३ हजार देखि ५ हजार सम्म रुपैयाँ पाउने ब्यबस्था छ ।